अशोक दर्जीको सुविधायुक्त घर; गाउँकै राम्रो ! हेर्नुहोस् घरको भित्र के के छन् (फोटो फिचर) – Peoples Daily Nepal
अशोक दर्जीको सुविधायुक्त घर; गाउँकै राम्रो ! हेर्नुहोस् घरको भित्र के के छन् (फोटो फिचर)
काठमाडौं । केही महिनासम्म सडकमा गीत गाएर पैसा माग्दै हिँड्ने बालक अशोक दर्जी र उनको परिवारको भाग्य फेरिएको छ । टहरोमा बस्दै आएको उनको परिवार हिजोबाट सुविधायुक्त नयाँ पक्की घरमा सरेको छ ।
चार कोठाको घर निर्माण र फर्निचर तथा अन्य सामग्रीका लागि करिब २५ लाख खर्च भएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । माथि तीन तल्लासम्म उठाउन सकिने गरी बनाइएको उनको भनाई छ । ‘यो गाउँमा सबैभन्दा राम्रो घर नै यही हो,’ बुढाथोकीले सुनाए । घर निर्माणका लागि दाताहरुबाट २१ लाख रुपैयाँ जुटेको उनले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी यूट्यूवमा पोष्ट भएका अशोकको भिडियोबाट ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । घर हस्तान्तरण गरिसकेर अशोकको खातामा १-२ लाख वचत हुन सक्ने बुढाथोकी बताउँछन् ।
यस भन्दा पहिलाकांग्रेसले नेतृत्व गरेको मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा आफन्त र नातागोतालाई मात्र जागिर
यस भन्दा पछिस्याङ्जाकी २० वर्षिया कृतिका बरालको रहस्यमय निधन